Home » Vaovao momba ny fizahantany » Barometre fiarovana momba ny dia lavitra: famantarana mamporisika ny dia amin'ny fahavaratra
Ny valin'ny Wave 5 an'ny Travel Safety Barometer tatitra, fanadihadiana momba ny fihetseham-po izay mandrefy ny fahitan'ny mpandeha amerikana ny maha-azo antoka ny fanaovana fitondran-tena manokana amin'ny ambaratonga 0 (Tena tsy azo antoka) mankany amin'ny 100 (Tena azo antoka), dia nambara amin'izao fotoana izao. Ny valim-pikarohana farany farany dia mampiharihary ny fahitan'ny mpandeha ny fiarovana dia miakatra amin'ny sehatra rehetra, manomboka amin'ny fitsangatsanganana an-toerana sy iraisam-pirenena ka hatrany amin'ny trano fandraisam-bahiny, fitsangantsanganana an-tsambo, fisakafoanana ary fialamboly, fitaterana ary dia ataon'ny orinasa.
Miaraka amin'ny fanjakana rehetra any Etazonia amin'izao fotoana izao amin'ny dingana sasany amin'ny fisokafana ary ny toerana iraisam-pirenena koa dia hisokatra, ireo dingana lehibe ireo Covid-19 ny fanarenana dia toa nisy fiatraikany tsara tamin'ny fahatsapan'ny mpandeha. Ny fahatokisana ny fiarovana ny fitsangatsanganana an-trano amin'ny ankapobeny dia niaina fitsambikinana 10 isa, nahazo isa 34 fotsiny tamin'ny Mey ary tafakatra 44 tamin'ny volana Jona. Ny fitsangatsanganana iraisampirenena dia niaina fiakarana 10 isa mitovy amin'izany, saingy ny isa amin'ny ankapobeny dia mbola ambany ihany amin'ny 32. Mihombo ny fitaterana, miaraka amin'ny Barom-piarovana ny fitaterana mandeha 56 ka hatramin'ny 60.
Mitsangana ny fahatokisan'ny mpitsangantsangana amin'ny fiaraha-misakafo sy fialamboly
Notaterin'ny mpandeha fa nahatsapa ho voaro izy ireo tamin'ny fandraisana anjara tamin'ireo hetsika natao tao amin'ilay fanadihadiana, izay misy ny mankeny amin'ny valan-javaboary, misakafo amin'ny trano fisakafoanana, ary manatrika hetsika ara-panatanjahan-tena (any an-trano sy any ivelany) ary koa ireo fety any ivelany. Ny hetsika ivelany dia mbola heverina ho azo antoka kokoa noho ny traikefa anaty, miaraka amin'ny fandehanana any amoron-dranomasina any ambony miaraka amin'ny isa azo antoka 50.
Fanatsarana ny mari-pahaizana momba ny fiarovana amin'ny lozisialy
Taorian'ny herinandro maromaro nijanonan'ny fijanonana dia nahita fiakarana mafy ny fahitan'ny mpandeha ny filaminan'ny trano fandraisam-bahiny, ary nitombo 35 ka hatramin'ny 44 ny Barometer Safe Barometer tamin'ny volana lasa teo. Izany dia mifandraika amin'ny ankamaroan'ny marika trano fandraisam-bahiny lehibe manomboka mampiroborobo ny fombafomba fidiovana vaovao ho an'ny fahasalaman'ny vahiny sy ny mpiasa. Ny isa azo antoka amin'ny fijanonana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny na trano fandraisam-bahiny ary mijanona ao amin'ny trano fanofana fialan-tsasatra dia ny hatoka sy hatoka.
Ny fiheverana ny fiarovana ny dia an-dranomasina an-trano dia nitombo 20% hatramin'ny Mey
Raha mbola mino ny ankamaroan'ny mpamaly fa ny fitsangatsangana amin'ny fiara no endrika azo antoka indrindra amin'ny diany (isa 74), ny mpandeha dia manomboka mitatitra fahatsapana fiarovana azo antoka rehefa mandeha amin'ny endrika fitaterana hafa, ao anatin'izany ny fitsangatsanganana an'habakabaka sy ny fitsangatsanganana an-dalamby. Ireo mpihetsiketsika dia nametraka ny fiarovana ny dia an-trano amin'ny isa 36 amin'ny Wave 5.
Ny fivezivezena amin'ny raharaham-barotra dia mety ho voaharikorin'ny tranga maro ao anatin'ny volana sy taona ho avy
Na dia manatsara ny teknolojia aza, ny lazan'ny lampihazo misy ny kaonferansa sy ny fahasarotan'ny fanatrehana fihaonambe feno olona dia mety hisy mpandeha amin'ny orinasa mandinika indray ny filana mandeha, ny fampitomboana ny refin'ny fitsangatsanganana amin'ny vokatra tamin'ny volana Jona dia tena nampahery. Ny Wave 5 dia nahatsikaritra fitsambikinana 7 isa teo amin'ireo mpandeha izay mahatsapa fa azo antoka ny dia ataon'ny orinasa, avy amin'ny isa 29 ka hatramin'ny 36.
Ny fanadihadiana momba ny Travel Safe Barometer dia atao isam-bolana amin'ireo mponina amerikana 1,200 izay nanao dia nandritra ny alina iray na ho an'ny orinasa na fialam-boly tao anatin'ny 12 volana lasa. Ny Wave 4 amin'ny fanadihadiana dia notontosaina tamin'ny 8 Mey 2020, ary ny Wave 5 dia notontosaina tamin'ny 9 Jona 2020.